La Yaabka Dunida: Ninkii caananaska ahaa (Nin jirkiisa oo dhan ay hareeyeen burrooyin) – SBC
La Yaabka Dunida: Ninkii caananaska ahaa (Nin jirkiisa oo dhan ay hareeyeen burrooyin)
Posted by editor on March 2, 2012 Comments
62 sano jir u dhashay dalka Hindiya ayaa loogu magacdarey “Ninkii Caananaska ahaa” ka dib markii uu wajigiisu u ekeeday geeska caananaaska ama pineapple-ka loo yaqaan taasi oo ku timid wajigiisa & jirkiisa intiisa kale oo ay gabi ahaanba qariyeen burooyin qariyeen.
Ninkan oo lagu magacaabo Mohamed Umar kuna nool Hyderabad ee dalka Hindiya ayaan ku dhalan cudurkan isagoo dhashay si caafimaad leh balse mudo ka dib cudurkan uu ku dhacay.
Mr Cumar ayaa marka laga tago cudurkan asiibay waxaa uga sii daran dadka oo ula dhaqma si ka baxsan bini’aadamtinimada, isagoo ku dooday in loo dhaqmo sida “Xayawaan usgag badan oo door joog ah”, waxaase uu sheegay in mushkiladii qabsatey ee xitaa shaqadiisii uu ku waayey uu ahaa qofka kaliya ee la qaybsadey xaaskiisa oo ay is qabaan iskuna dhaleen cafar caruur ah.
Mohammad Umar ayaa astaamaha cudurkan wuxuu isku arkay isagoo 14 sano da’diisu tahay, waxaana xiligaasi intii ka dambeysay jirkiisa oo dhan si tartiib tartiib ah ugu soo kordhayay burooyin ka soo bilowdey gacmihiisa, waxaase hada ay dabooleen guud ahaan jirkiisa.
“Waxaan ahay nin wanaagsan, waan shaqeynsan karaa, laakiin muuqaalkeyga ayaa dadka kale dhibaato ku ah, ma jirto cid I eegi karta ama igu soo dhawaan karta aan ka aheyn xaaskeyga” ayuu yiri ninkaasi.
Umar ayaa ka dhaxlay cudurkan hooyadiis gacnna ku laheyd burooyinkan taasi oo la sheegay inay u gudbisay, waxaana ay geeriyootey sanadkii 2001-dii.
“Waxaan ku dhashay jir jilicsan, ma aanan xaqiiqsan karin waxa ay ka bilowdeen, marka ay igu bilowdeen, laakiin 14 sano jir markii aan ahaa hooyadeed ayaa xaqiiqsatey in ay la mid tahay xaaladaasi tii iyada haysatey, balse iyadu waxay ku laheyd burrooyinkaasi gacmaha iyadoo i geysay dhakhtar” ayuu hadalkiisa sii raaciyey Mohamed Cumar.
Laakiin sanado ka dib xaalada Cumar waxay gashay heer xun iyadoo markii uu gaaray da’da 20 sano uu ka dareemay jirkiisa qaybaha kale calaamado muujinaya in burrooyinku kordhayaan.
“Waan ogaa in xaaladu ku socoto mid xun, waana xaqiiqsadey in mushkilo ay timid, waxaana dhakhaatiirtu ii sheegeen in aan u sii gudbin karo caruur hadii aan yeesho, waxaa igu bilowdey walwal iyadoo dhakhtarku ii sheegay in daaweynta cudurku ay tahay mid rajo yar, waxaase walwalka iigu darsamay inaan guursan doono oo heli doono haweenay iga aqbasha inaan guursado” ayuu hadalkiisa sii raaciyey Cumar.
Laakiin 28 jir markii uu ahaa Mohamed Cumar oo la tacaalaya cudurkaasi oo ku dhaca 2500 qof mid ka mid ah dunida ayaa sheegay in uu la kulmay Farhat-un-Nisa, oo 45 sano jir ah haatan waxaana ay isku qaadeen Jaceyl, iyadoo Farhat aanay dan iyo heelo ka galin cudurka Cumar.
“Waxaan dareemi karaa in Cumar yahay nin wanaagsan, wuxuu ahaa nin naxariis badan, isla markaana deeqsi ah, qoyskeygu waxay iiga digeen mustaqbalkeyga in xaalad adag soo wajahi doonto hadii cudurka jirkiisa asiibay uu ka sii daro, waxay u tageen dhakhtar iyagoo aniga I matalaya, laakiin waxaan go’aansadey inaan qaato qatarta.” ayey tiri Farhat oo muujisay qanacsanaanya saygeeda ILAAH cudurka u keenay.
Cumar & Farhat markii ay isguursadeen oo ay go’aansadeen inay awlaad isu dhalaan isla markaana da’doodu kortey waxay dareemeen inaanu jirin wax saameyn ah oo Farhat cudurku ku yeeshay, walow sanadba sanadka ka dambeeya ay arkaysay saygeeda oo ay ku soo badanayaan burrooyinka jirkiisa ka soo baxaya.
“Waxaan dareemay caawimaad la’aan, dhakhtarku wuxuu ii sheegay inaanu jirin wax daaweyn cudurkaasi, wixii xiligaasi ka dambeeyey saameyn ayuu cudurku ku yeeshay Cumar, nin wuxuu ahaa mar kasta faraxsan, laakiin wuxuu noqdey qof walwalsan, waxaana u halganay inaan inaan qoyska sii nagaado oo uu dhisnaado” ayey hadalkeeda sii raacisay Fatha.
Isla xiligaasi Mohamed wuxuu waayey shaqadiisii uu ka hayey xarunta tareenada, mana jirin cid kale oo u ogolaatey in uu la shaqeeyo isagoo arimahasi ka hadlaya ayuu yiri “ Iyadoo ay kordhayaan burrooyinka dadka ku safraya xarunta tareenadda waxay ku mushquulsanayeen eegmadeyda iyagoo waliba xambaarsan shandadahooda, taasi waxay ka keentey in madaxdii shaqada in uu iga eryo halkii ay nolasheydu ku tiirsaneyn, markasta oo aan isku dayo inaan shaqo tago dadku way I bahdilaan, iyagoo si la yaab leh u soo eegaya jirkeyga”.
Dhibaatadu intaasi uguma koobnaan Umar waxaa kale oo dhib ka qabsadey in uu helo guri uu kireysto, iyadoo dadka guryaha iska leh ay diideen inay ka kireeyey, taasi oo ay ula jeedeen cabsi ay ka qabeen in uu cudurka ku beero, isaga iyo qoyskiisa tiro ka dhawr ayey guureen ka gadaal markii laga saaray guryihii ay deganaayeen.
Laakiin ugu dambeyntii Farhat waxay ka hesho waqti-dhiman (part time job) Iskool deegaanka ku yaal iyadoo nolasha qoyska dabareysay.
Walow xaaladaasi ay ku wada noolaaneey Mohamed & Farhat waxay isu dhaleen afar ilmood oo kala ah 3 wiil & gabar lagu magacaabo Shama oo 25 sano jir haatan isla markaana la qabo, wiilasha ayaa kala ah Mohamed Hussain oo 20 sano jir ah, Mohamed Subani oo 18 jir ah iyo Khaja oo 12 sano jir ah.
Inkastoo afarta caruurta aan lagu arki cudurkaasi hadana wiilka ugu yar ee 12 jirka ah waxaa laga dareemayaa calaamo in cudurku so ohayo ka dib markii wajigiisa laga dheehday raadad ku aadan bilowda cudurka, balse inta kale laguma hayo wax calaamado muujinaya cudurkaasi in uu ku soo fool leeyahay.
Umar wuxuu hada bilaabay in uu ka dawarsado wadooyinka magaalada, laakiin waxaa walaac ku haya dadka oo qaarkood inay wax siiyaan iska daayee kula dhaqma falal xun.
Jaalle Mawliid Xaaj Cabdi ilama fiicna in aad soo qortid wax yaalo an u fiicnayn qalbiga Ibna aadamka.Sida ninka kor ku qoran oo kale.Hadda ka horna waxaad soo qortay mid kasii daran.Waxaad soo masawirtay haweenay mayd ah oo uu nin dul taagan yahay oo ad tiri ninkaas baa maydka aroosaya.
Mawliid muslinimo baad ku dhalatay oo ku soo bar-baartay oo diinta Islaamka wax baad ka taqaanaaye miyaad waligaa maqashay ama aragtay mayd la guursado?Fadlan inagadaa akhbaaraha noocaasa.Saas waxaan kuu leeyahay waxaan akhbaarahaaga maqlayey ama dhageeysanayey illaa waagii ad ka shaqeeyn jirtey SBC ee Bosaaso.Hadda ka horna kaama arag wax an dhibsado.
ASC SALAAN KADIB qof kasta waxa uu leeyahay dhaliil iyo amaan marka mowliid waxa uu leeyahay amaan fara badan iyo waxoogaa dhaliil ah marka intaas waxaanu leenahay fadlan wixii aan macquul ahayn caqligana gali karin bulshada ha u soo gudbid thanks by waxgarad